साबधान ! हरेक दिन पानी पिउदा यि गल्ति भुलेर पनी नगर्नुहोस..अन्यथा – NepalajaMedia
साबधान ! हरेक दिन पानी पिउदा यि गल्ति भुलेर पनी नगर्नुहोस..अन्यथा
काठमाडौँ – भनिन्छ पानी जिन्दगानी । हुनपनि मानव जीवनमा पानीको निकै महत्व छ । हामी दैनिक रुपमा पानी पिउँछौँ तर पानी खाने समय र तरिकाबारे तपाईं हामी सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ, यतिबेला कोरोना भाईरस ‘कोभिड – १९’ को कहरमा विश्व नै अक्रान्त भएको छ । अहिले चिकित्सकले पनि मनतातो पानी खानको लागि नै सुझाएका छन् ।
जानीराखौँ– पानीले तिर्खा मेट्ने मात्र होइन, यसको नियमित सेवनले सम्भावित कैयौं रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ। पानी कुनै रोगको उपचार नभए पनि यसले पेटको सफाइ गर्ने काम गर्छ। हो, विभिन्न शोध तथा अध्ययनले देखाएअनुसार तपाइले बिहानै मनतातो पानी पिउने बानी पार्नुभयो भने विभिन्न रोगबाट छुट्कारा समेत पाउनुहुनेछ । प्रशस्त पानी पिउँदा शरीरको फोहोर र विषाक्त पदार्थ पसिना र पिसाबका रूपमा बाहिर निस्कन्छ ।
सामान्य व्यक्तिले (पुरूष या महिला) दिनमा दुईदेखि तीन लिटर पानी पिउनुपर्ने हुन्छ। तर यो एकै चोटी पिउनु हुँदैन। यसको लागि यही समय भन्ने पनि छैन। अथवा सबैले यही नै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर पिसाब पहेँलो हुनुहुँदैन। पिसाब पोल्ने, गन्हाउने, ‘कलर’ बदलिने भएमा पानी नपुगेको संकेत पनि हुनसक्छ । तिर्खा लागिहाल्यो भने ‘एकछिनपछि’ भनेर बस्नुभएन ।
इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले गरेको एक अध्ययनले युवा अवस्थामा पुरुषलाई प्रतिदिन तीन र महिलालाई दुई दशमलव दुई लिटर पानी पिउनुपर्ने बताएको छ । तर याद राखौँ हरेक मानिसको शरीरको बनावट र आवश्यकता फरक पर्दछ । धेरै गर्मी छ शरीरमा पसिना आएको छ अथवा काम गरिएको छ भने पानीको मात्रा बढाउनुपर्ने पनि हुन्छ। वा दौड, गह्रौँ सामान उचाल्ने, कडा परिश्रम भएको बेला पानीको मात्रा पनि बढाउनुपर्छ ।
मधुमेहको मात्रा अनुसार पानीको मात्रा घटाउने बढाउने गर्नुपर्छ।
पखाला लागेको बेलामा पानीको मात्रा बढाउनुपर्छ। कडा परिश्रमको बेला पनि पानीको मात्रा बढाउनुपर्छ।
राम्रो मष्तिष्कको लागि पनि शरीरले आवश्यक ठाने जति पानी पिउनुपर्छ ।एक पटकमा धेरै पानी नपिऔँ
खाना खाने समयभन्दा आधा घण्टा अगाडी, खानापछिको आधा घण्टासम्म पानी पिउनु हुँदैन ।राति पनि अटसमटस पानी पिएर सुत्नु हुँदैन ।
नयाँ ठाउँमा जाँदा जहाँको पायो त्यहाँको पानी खानु हुँदैन । तातो झोल खानेकुरा र चिसो पानी लगत्तै पिउने गर्नुहुँदैन ।
सकेसम्म पानी ग्लासमा राखेर पिउनुपर्छ ।एलर्जीको समस्या हुनेहरुले भने चिसो पानी पिउनु हुँदैन।पानीमा आइस हालेर पिउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैन ।
सानो सानो घुट्कोमा पानी पिउनुहोस् । गलत तरिकाले पानी पिउँदा मृगौला समस्या हुन सक्छ । एक्सरसाईज गर्दागर्दैको अवस्थामा तत्कालै धेरै पानी नपिउनुहोस् ।
दौडदा घाँटी मात्रै भिजाउनुहोस् । धेरै पानी नपिउनुहोस् । पानी पिउने गलत तरिकाले तपाईंको टाउकोमा टाउको दुख्ने, भारीपन र सुस्ती निम्त्याउन सक्छ ।
Nextप्रेममा वि’छोड भए पी’डा भुल्न यी ५ काम गर्नुस्